Golaha Shacbiga oo dalbaday in dalka laga saaro KDF | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka November 15, 2015	0 540 Views
Muqdisho – Golaha Shacbiga Soomaaliyeed ayaa ka doodaya suura-galnimada ah in ciidamada shisheeye ee Kenya–kuwaas oo qeyb ka ah howl-galka loogu yeero Nabad Ilaalinta Soomaaliya–laga saaro gebi ahaanba dalka.
Maxamed Cumar Dalxa, oo ah Guddiga Arrimaha Dibadda ee Golaha Shacbiga Qaranka ayaa sheegay inay Kenya waji cusub oo ugub ku ah sooyaalka Soomaalida ku fara-galisay madax-banaanida daleed ee Soomaaliya.
“Falka ay Kenya wado waa mid xittaa kahor imaanaya xeerka caalamiga ah ee soohdimaha; marka waa in ciidamada KDF laga saaro dalkeenna,” ayuu kahor yiri Golaha Shacbiga. “Waxaynu sidoo kale codsanay ciidamo badala howsha aan ku joogaan Soomaaliya,” ayuu sii raaciyay.
Kenya ayaa wada dadaal ay rabto inay ku dhisto gidaar fogaan ahaan gaaraya 440-mile oo kasoo bilaabanaya cirifka xadeedka badeed ee Badweynta Hindiya ilaa Mandera oo ay la wadaagto Soomaaliya. Tanina, sida ay sheegtay waa dhufeys ay kaga gaashaamaneyso weerarada kaga imaanaya Ururka Al-Shabaab.
Guddoonka Golaha Shacbiga, Maxamed Osman Jawaari ayaa sheegay in tira ku dhow 160-mudanayaal ay cod mideysan ku oggolaadeen in KDF laga saaro dalka.
Next: Qaxootiga Yemen oo kusoo qulqulaya Jabuuti
80-jir leh timo dherer la’eg 3 mitir.